WordPress Premium Themes — MYSTERY ZILLION
August 2010 edited August 2010 in Blog
ဟီး ... POST ရေးသာရေးရသာ အားနာချာကြီး .. ခွိ
အနော့် Blog မှာ တင်ပီးသားလေးပါ... ဒါပေမယ့် MZ က Wordpress သုံးတဲ့သူတွေလည်း အဆင်ပြေအောင် ပြန် Share ပေးလိုက်တာပါ. Wordpress Premium Themes လေးတွေပါ။ Premium ဆိုတာနဲ့ WordPress သုံးတဲ့သူတွေကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်. ကြိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုက်လောက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အကုန်လုံးက အရင် Free Themes တွေနဲ့ Interface တွေမတူဘူးဗျ။ လန်းတာတော့လန်းတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်မယ့် သူတွေအတွက် Download Link တင်ပေးထားပါတယ်။ File Size ကို နည်းသွားအောင် အနော် RAR file နှစ်ထပ်ကွန့်လိုက်ရတယ်.. ခွိခွိ။ ဒီ Themes တွေက ကိုမီကို ရဲ့ Themes တွေပါ။ အနော်တို့ကို MYiD Camp တုန်းက ကိုဇူဇူးပေးလိုက်တာပါ။ MYiD ပွဲတုန်းက လာတဲ့သူတွေကတော့ သိမှာပါ.. အဟတ်။ Themes စုစုပေါင်း တစ်ရာတိတိပါပါတယ်. File Size ကတော့ Original ကတော့ 74.1MB ရှိပါတယ်.. အနော်က အဆင်ပြေအောင် 28.7MB ပဲကျန်အာင် RAR လုပ်ထားပါတယ်။ WinRAR ဖြစ်ဖြစ် 7zip ဖြစ်ဖြစ် သွင်းထားမှအဆင်ပြေလောက်မှာပါ… LOL
(ဘာမှမဟုတ်ဘူး .. ကိုယ့် Site ကိုကိုယ်ကျော်ညာတာ .. အဟတ် )
August 2010 edited August 2010 Moderators
သြော်... ifile နဲ့ မရရင်ပြောနော်.. တခြားဟာနဲ့ပြန်တင်ပေးမယ်.. အဟတ်
( ၀င်ကြည့်တာတော့အညာကြီး .. နာ့ကို သန့်နဲ့ ရီပူတေးရှင်းလေးတောင်ပေးတွား၀ူး .. တိန်.. ခံဟ .. ခွိ )
August 2010 edited August 2010 Registered Users
Warning: fopen(/home/a1541689/public_html/wp-content/plugins/share-and-follow/css/print.css) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/a1541689/public_html/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 309
Warning: fwrite(): supplied argument is notavalid stream resource in /home/a1541689/public_html/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 315
Warning: fclose(): supplied argument is notavalid stream resource in /home/a1541689/public_html/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 318
အဲ့တာသာကြည့်ကိုစေတန် အဲ့တာ share and follow plugin တင်တာကို အဲ့တာတွေပေါ်နေတယ်ဗျ။ အနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။
August 2010 edited August 2010 Administrators
လို့ရေးထားတယ်လေ။ /home/a1541689/public_html/wp-content/plugins/share-and-follow/css/print.css က file မရှိတာ ဖြစ်နိုင်သလို read permission မရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ print.css ကို 775 ပေးထားဖို့လိုတယ်။
တစ်ချို့ Plugins တွေက ဖရီးဟို့စ်တွေနဲ့ အဆင်မပြေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Premium Themes တွေမှာ Auto plugins တွေပါပါတယ်. တစ်ချို့ Free Hosts တွေက Plugins တွေသွင်းလို့မရဘူးဗျ... FTP နဲ့ပိတ်ထားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ကိုစေတန်ပြောတဲ့ print.css ရှိတယ်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ အဲ့ print.css ကို folder permissions ပေးထားပြီးသားဗျ။ အဲ့စာတွေပေါ်နေလို ့ကို အကုန်လုံးတစ်ခုမကျန် permission လိုက်ပေးထားတာ။ ကိုင်း အနော်ဘာလုပ်ရအုံးမလဲဗျာ။
ကျွန်တော် artisteer နဲ ့ကမြင်းကြောထပြီးဆွဲထားတဲ့ theme လေးတွေရှီပါတယ်